Warshad waa goob laga sameeyo alaabo kala duwan. Marka wax la sameeyo, waxay u baahan yihiin keydin ku meel gaar ah ama waqti qaadasho ah. Tani waxay u baahan tahay bakhaar, taas oo iyadu u baahan adeegsiga khaanadaha bakhaarka. Iyada oo ay ugu wacan tahay baaxadda warshadda, qaabka iyo aagga bakhaarradu way kala duwan yihiin, iyo soo iibsiga iyo isticmaalka shelfyadu isku mid maaha. Weligaa ma la yaabtay, sababta oo ah warshadda ayaa dooneysa inay iibsato shelfado bakhaarro ah, oo shelves ay soo dhoweeyaan soo saareyaashu?
Adeegsiga shelefyada bakhaarada waa in loo sheegaa inay tahay heer. Tani waa sababta oo ah bakhaarradu waa xadidan yihiin cabirkooda iyadoo aan loo eegin ballaca. Haddii aad kaliya u isticmaasho kaydinta dhulka, waxaad dhowaan ogaan doontaa in caymiskani uu noqon doono mid aad u dhakhso badan, waxayna umuuqataa inay tahay “furaha hoose”, marwalbana casri kuma filna.
Wershada dhexdeeda, alaabada la soo saaray ma badna tiro ahaan, ama isbarbar dhiga degdega ah ee soo rogista. Waxaan u baahanahay jawi ka sii heer sarreeya, bey'ad keydin oo fiican, qalab keyd. Waqtigaan, haddii soo iibsiga iyo rakibida ay adeegsadaan shelfadaha bakhaarrada u dhigma, saameynta kaydinta saddex-geesoodka ah ayaa la rumeeysan yahay, iyo aagag kala duwan ayaa saynis ahaan loogu qeybiyey qolka bakhaarada oo dhan, kaas oo ku habboon maareyn, ku habboon qaybinta shelf, iyo ku habboon. in shaqaaluhu si hufan ugu shaqeeyaan. . Isla mar ahaantaana, bakhaar u adeegsaneysa shelfiska kaydinta had iyo jeer wuxuu dareemaa inuu yahay mid aad u ballaaran oo dhaadheer, iyo muuqaalka shirkadda u muuqda inuu wax badan ka soo hagaagay.
Xaqiiqdii, waxay lamid tahay adeegsiga shelfiska warshadaha wareegga, noocyada shebeelka bakhaarrada ee badanaa loo isticmaalo warshadaha waa shelefyada doomaha culus, ku kaxaynta shelfyada, shelf dabaqa mezzanine, aaladaha birta iyo shelfyada raadiyaha. Nooc kasta oo shelf ah wuxuu leeyahay astaamo qaab-dhismeed u gaar ah iyo faa'iidooyin xambaarsan, qaarkood waxay leeyihiin awood culeys culus oo culeys ah waxayna yihiin qaab wareega keyd dhan; Qaarkood waxay leeyihiin cufnaanta sare ee alaabada waxayna kuxiran yihiin farsamaynta iyo habsami u socodka. Waxaan u baahanahay in si gaar ah loo go’aamiyo iyada oo loo eegayo xaaladda warshadaha waxsoosaarka.
Waqtiga boostada: Apr-03-2020
Xidhitaanka lakabyo Badan , Wadada Shanaad , Suuqa Suuqa , Qalabka Birta , Xarig , Asal aamisan ,